ပုရိသတွေ မနေနိုင်အောင် ဓာတ်ဖမ်းနေတဲ့ လုလုအောင် – Zartiman
မော်ဒယ်လုလုအောင်ဟာ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော်လေးလို့ ပြောရတဲ့ သူမကတော့ ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ ပုံရိပ်လေး တွေကို လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာထက်မှာ တင်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ သူမကတော့ ယခုမှာ ပုရိသတွေအသည်းယားလောက်အောင် ဆွဲဆောင်မှုရှိလွန်းတဲ့ အလှတ ရားနဲ့ အထာကျကျလေး ဓာတ်ဖမ်းနေခဲ့ပါ တယ်။ သူမရဲ့ အမိုက်စား ဖက်ရှင်လေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေဟာ လွမ်းနေ တဲ့ ပရိသတ်တွေကို အချစ်တွေပိုစေခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အောင်မြင်တဲ့ မော်ဒယ်တစ်ယောက်အဖြစ် အနုပညာလောကမှာ ရပ်တည်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့ မော်ဒယ် လုလုအောင်ကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကို အခိုင်အမာရယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ မော်ဒယ်တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အမိုက်စားခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်း အလှတရား ကို ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့ သူမကတော့ အမိုက်စား ဖက်ရှင်လေးတွေ အလန်းစား ဖက်ရှင်လေးတွေကို ဝတ်ဆင်လေ့ရှိပြီး ပြည်သူချစ်အနု ပညာရှင်တစ်ယောက်ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။
သူမကတော့ ” ကိုယ့်ကိုကိုယ် အကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့ ပြင်ဆင်ထားရင်… ကျေနပ်မှာဘဲ ပြည့်စုံခန့်ညားတဲ့အမျိုးသား အမျိုးသမီးနဲ့ လက်ထပ် ခွင့် ရရင် အရမ်းပျော်ရွှင်မှာဘဲ…. အဲဒီလိုတာဖြစ်မယ်ဆို ကိုးရီးယား က ဆူဆိုက်လုပ်တာနဲ့ ကွာရှင်းမူ အများဆုံးဘာလို့ ဖြစ်မလဲနော် ” ဆို ပြီး သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာထက်မှာ ရေးသားထားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် မော်ဒယ်လုလုအောင်ရဲ့ အမိုက် စားပုံရိပ်လေးတွေကို ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။
SOURCE : Lulu aung ‘S FACEBOOK PAGE
မျောဒယျလုလုအောငျဟာ ပရိသတျတှရေဲ့ အခဈြတျောလေးလို့ ပွောရတဲ့ သူမကတော့ ခဈြစရာကောငျးလှနျးတဲ့ ပုံရိပျလေး တှကေို လူမှုကှနျယကျ စာမကျြနှာထကျမှာ တငျပေးလရှေိ့ပါတယျ။ သူမကတော့ ယခုမှာ ပုရိသတှအေသညျးယားလောကျအောငျ ဆှဲဆောငျမှုရှိလှနျးတဲ့ အလှတ ရားနဲ့ အထာကကြလြေး ဓာတျဖမျးနခေဲ့ပါ တယျ။ သူမရဲ့ အမိုကျစား ဖကျရှငျလေးနဲ့ ခဈြစရာကောငျးလှနျးတဲ့ ပုံရိပျလေးတှဟော လှမျးနေ တဲ့ ပရိသတျတှကေို အခဈြတှပေိုစခေဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။
အောငျမွငျတဲ့ မျောဒယျတဈယောကျအဖွဈ အနုပညာလောကမှာ ရပျတညျထားနိုငျခဲ့တဲ့ မျောဒယျ လုလုအောငျကတော့ ပရိသတျတှရေဲ့ ခဈြခငျအားပေးမှုကို အခိုငျအမာရယူထားနိုငျခဲ့တဲ့ မျောဒယျတဈယောကျပဲ ဖွဈပါတယျ။ အမိုကျစားခန်ဓာကိုယျကောကျကွောငျး အလှတရား ကို ရရှိပိုငျဆိုငျထားနိုငျခဲ့တဲ့ သူမကတော့ အမိုကျစား ဖကျရှငျလေးတှေ အလနျးစား ဖကျရှငျလေးတှကေို ဝတျဆငျလရှေိ့ပွီး ပွညျသူခဈြအနု ပညာရှငျတဈယောကျဆိုရငျလညျး မမှားပါဘူး။
သူမကတော့ ” ကိုယျ့ကိုကိုယျ အကောငျးဆုံးဖွဈဖို့ ပွငျဆငျထားရငျ… ကနြေပျမှာဘဲ ပွညျ့စုံခနျ့ညားတဲ့အမြိုးသား အမြိုးသမီးနဲ့ လကျထပျ ခှငျ့ ရရငျ အရမျးပြျောရှငျမှာဘဲ…. အဲဒီလိုတာဖွဈမယျဆို ကိုးရီးယား က ဆူဆိုကျလုပျတာနဲ့ ကှာရှငျးမူ အမြားဆုံးဘာလို့ ဖွဈမလဲနျော ” ဆို ပွီး သူမရဲ့ လူမှုကှနျယကျ စာမကျြနှာထကျမှာ ရေးသားထားခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ခဈြပရိသတျတှအေတှကျ မျောဒယျလုလုအောငျရဲ့ အမိုကျ စားပုံရိပျလေးတှကေို ပွနျလညျဖျောပွပေးလိုကျရပါတယျ။
အသည်းယားစရာ ဆက်ဆီကျနေတဲ့ ပိုပို၏ အကြမ်းစားVIDEO
မင်သက်မိသွားလောက်အောင် အမိုက်စား ကပြထားတဲ့ မေဘရဏီစံ
အမိုက်စား ပိုစ့်တွေပေးနေတဲ့ ပုံလေးတွေ တင်ပေးလိုက်တဲ့ Lလစ်ရှား